Idemokhrasi ayiwona uzifo zonke - Bayede News
Idemokhrasi ayiwona uzifo zonke
NGIKHULUMA ngoMsombuluko emsakazweni uKhozi FM ohlelweni ‘Hlaziya ipolitiki ngolimi lwakho” ngiphawule ngenyoni okuthiwa ngu pholi. Lenyoni emibalabala iyathandeka, futhi okuyenza ithandeke wukuthi ikwazi ukwenza into ezinye izinyoni ezingakwazi ukuyenza. Upholi uyakwazi ukuphimisa izinhlamvu zamagama. Nokho okuyisici esingesihle ngopholi njengoba ngichazile wukuthi konke lokhu akuphimisayo kusuke kuwukuphindaphinda nje inkulumo esuke ibekwe ngomunye. Okunye okuyisici ngaye wukuthi kwala ngisho umnikazi kapholi esethule , yena upholi uyaqhubeka amemeze.
Okufanayo sikubona nakwipolitiki yomhlaba lapho abamnumzane nomama abamele amaqembu abo ePhalamende nakwiziShayamthetho bephenduka babe ngopholi. Akugcini lapho ngoba nakithi malungu omphakathi yiso leso. Sinede sizwe kukhuluma imithombo yabezindaba, ikakhulukazi eyaphesheya kwezilwandle, ngaphandle kokukuhluza okukhulunywayo bese siba ngopholi. Isibonelo nje nxa kufika kwipolitiki yase Afrika kulula ukuzwa abantu sebekhuluma kuvele amankanka ngezwe noma ngomholi othile. Uthi nxa ulalela ukuthi lokho kukhuluma kuqhamukaphi bese uzwa ukuthi lokhu umuntu akhuluma aze ome amathe ngakho, empeleni ukucoshe emthonjeni yezindaba.
Kuba njalo nalapho abantu bekhuluma ngentando yabantu. Le nqubo bayiphendula isoka elingenasici nabaholi abangaphansi kwayo kube sengathi bamsulwa. Iqiniso lomhlaba lithi kayikho inqubo engenasici. Kungaba ngeyobukhosi, eyenkolo noma yona intando yabantu. Konke kunezici zakho.
Okushaqisayo ngabalandeli be demokhrasi wukuthi bakholwa ukuthi kayinaphutha nokwenza bahlale njalo nje bebukela phansi ezinye izinqubo. Isibonelo nje, bathi ubukhosi kabulungile ngoba abunayo i democracy, bese umangala ukuthi lokho bakuthathaphi.
Isibonelo nje balwisana nezinkantolo zamakhosi ngoba bethi kazinayo idemocracy. Umbuzo abangafuni ukuwuphendula ngowokuthi yikuphi okungcono ukuthetha icala ngaphansi kwesihlala kukhona wonke umuntu, unikwe nethuba elanele lokuziphendulela kanjalo nalabo abazokwahlulela kanye nabazokushwelezela babe khona. Lapho ungadinge kukhokha izizumbulu zabameli.
Lapho ungezoyojamelana nendoda kumbe umama nje ongakaze akubone nakwaMadala eJudeni. Lo mama noma ubaba wahlulela eyedwa. Impumelelo yakho lulelo cala iya ngokuthi unamalini.
Kule nkundla yakhe amathuba akho okuphunyuka ancike ekuqumbeni kwesikhwama sakho. Lokhu sikubonile kumfoka Prestorius, imali yakhe imthengela isigwebo esilula. Kulokhu kokubili yikuphi ongathi kunobulungiswa?
Abathandi be demokhrasi abavume ukuthi lenqubo yize iyisoka kodwa nayo inezici. Ngaphansi kwayo umhlaba usubone izimpi ezesabekayo lapho amazwe angaphansi kwalenqubo eduna khona imihlaba yabangenamandla kusetshenziswa izibhamu ezinamandla esabekayo. Ngaphansi kwe demokhrasi sekwande izintandane, abantu abangasebenzi kanjalo nobubha. Ubugebengu nokudlebeleka kwabantu yinto eyenzeka nsuku zaphuma ngaphansi kwe demokhrasi.
Uzalelwe yinja endlini uHulumeni eMali
Abaholi be demokhrasi bayafana nje nabobandlulo uma ulalela ukuthi nabo bayakwazi ukusebenzisa umthethosisekelo ukucindezela amalungelo abantu. Okokweba imali ke khona akudingi nokuthi singene kukho ngoba sekwaba ngumumba nedlelo uma kukhulunywa ngedemocracy. Uma ungangikholwa kwengikushoyo zibuze ukuthi inzikamnotho yenzeke ngasiphi isikhathi nangaphansi kwayiphi inqubo?
Kuwukuphupha emini ukucabanga ukuthi ngoba nakhu sinedemocracy ngakho zonke izinto zizohamba kahle. Ukucabanga ukuthi idemocracy le inguzifo zonke kungukuzikhohlisa isibili.
Sesiphilile ngaphansi kwedemokhrasi iminyaka engamashumi amabili nanhlanu. Cishe sesibone ngokusobala ukuthi njengobandlululo, nayo idemocracy isilethele ezayo izinkinga nje.
UNhlanhla Mtaka umhlaziyi wepolitiki ozimele
nguMfo waKwaNomajalimane Nov 22, 2019